घटना र विचार, न्युज डेस्क !6months ago July 17, 2019
छविराज ओझा भन्छन्– ‘महिलाहरूले मलाई भऱ्याङ मात्र बनाए । जीवनमा आए, फाइदा उठाए । पहिचान पाएपछि विभिन्न बहानामा मलाई छोडेनन् मात्र कि विभिन्न आरोप र लान्छना लगाएर बदनाम तुल्याए ।’
यस्तै, शिल्पा पोखरेलको तर्क अर्कै छ– ‘श्रीमतीहरूबाट एक्लिएका मान्छेलाई साथ दिउँ न त भनेर गएँ, सोच–ब्यवहार गलत पाएपछि कति प्रताडित हुनु भनेर कानुनी उपचारतिर लागेकी हुँ ।’
श्रीमान–श्रीमतीको घरभित्रको यो कुरा जब प्रहरी स्टेशनसम्म पुग्यो तब, मिडियामा विभिन्न स्वादका मसलाको रूपमा आउन थाल्यो । कसैले छविलाई उचाले भने कसैले शिल्पाको आँशुलाई हेडलाइन बनाए । कोहीले ‘शिल्पाले खोलिन् यस्तो कुरा’ भने त कसैले ‘छविको गुनासो यस्तो’ भन्दै यो निरस पारिवारिक झगडालाई तात्तातो बहस बनाए । तर कसैले पनि छवि र शिल्पालाई सम्झाउने काम गरेनन् र यसतर्फ सोचेनन् पनि । अब पुग्यो भनेर कसैले छवि–शिल्पालाई सतर्क पनि गराएनन् । सबै देखिए – थचार्ने, उकास्ने, निचोर्ने, भत्काउने र भड्काउने मात्र ।
नेपालको सर्भेक्षणले देखाएको कुरा सही नै रहेछ– ‘नेपालमा ९० प्रतिशत नेपालीहरू नेगेटिभ सोच्छन् र त्यस्तै हेर्न रूचि राख्छन् । नत्र यो भन्दा अगाडि छवि र शिल्पाको बारेमा यूट्यूबरहरूले लिएको कुनै पनि अन्तरवार्ताको दश हजार भ्यूज कटेको रेकर्ड छैन । तर यो झगडाको अन्तरवार्ताको लाखौँ भ्यूज कटेको छ । कुनै समय शिल्पा र छविको अन्तर्वार्ता के लिनु भ्यूज नै जाँदैन भनेर इग्नोर गर्नेहरू अहिले छवि र शिल्पालाई ढुकेर बस्न थालेका छन् । छवि ओझाले भनेजस्तै यो मामिलामा भने छवि मात्र होइन कि अहिले शिल्पा पनि प्रयोग भैरहेकी छिन् ।
गल्ती कसको कम थियो या कसको बढी ? अहिले यही कुरा बाझिएको छ । घरभित्रको कुरा जब छताछुल्ल भएर सार्वजनिक भयो तब, एकले अर्कोलाई गलत देखाउँदै आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको देखिन्छ ।
अहिले त छवि र शिल्पा यस्तो प्रतिशोधमा उत्रिएका देखिन्छन् कि कसरी एकले अर्कोलाई बढ़ी भन्दा बढी निच देखाउने या गिराउने ? यो काण्डबाट यी दुबैले आफ्नो करियर र व्यक्तित्व नै गिराएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । पर्दामा शिल्पा र फिल्ममेकरमा छवि ओझालाई आदर्श मान्नेहरू यतिबेला धिक्कार मानिरहेका छन्– ‘घरभित्रको झगडा घरभित्र पनि मिल्न सक्दथ्यो ।’
पारपाचुके सहमतिमा पनि हुन सक्दथ्यो तर मिडियामा आएर एकले अर्कोलाई तथानाम गाली गरेर आफ्नो आङको छारो आफैं उडाउनु पर्दैनथ्यो कि ?!– शुभचिन्तकहरूको धारणा छ ।
हुँदा–हुँदा छवि–शिल्पाको भान्छासम्मको कुरा आएको छ । यही कुरा बढ्दा–बढ्दा अब बेडसम्म त पुग्नुहुन्न तपाईंहरू ? त्यहाँसम्मको अवस्थाको बारेमा छताछुल्ल नगर्नुहोला । भान्छासम्मै सीमित राख्नुहोला ।
‘शिल्पा रोइन् अनि सबै उतै लागे’ भन्छन् छवि । उता ‘बर्षौंदेखिको पीडाबाट मुक्ति पाएको छु । मन हलुङ्गो भएको छ’, यस्तो भन्छिन् शिल्पा ।